Izici zensimbi ekhanyayo ye-villa nokwakhiwa kwesistimu
I-villa yensimbi ekhanyayo, eyaziwa nangokuthi isakhiwo sezindlu zensimbi elula, impahla yayo eyinhloko yenziwa ngediphu eshisayo yensimbi yensimbi yensimbi ngobandayo bokugaya ubuchwepheshe bokukhanya kwensimbi ekhanyayo. Isakhiwo se-aluminium-zinc ingxubevange yensimbi yensimbi eyenziwe nge-aluminium-zinc sakhiwe nge-55% aluminium, ...
Umlando Wentuthuko we-villa yensimbi ekhanyayo ekhaya naphesheya
Muva nje, emakethe yezindlu kwaqhuma ukuqhuma "komoya omncane we-villa villa", le nto entsha idale ukuthi abantu abaningi bayinake. Indlu yensimbi ekhanyayo yavela eChina ngawo-1990. Namuhla, ubuchwepheshe bokwakhiwa kwesakhiwo sensimbi buvuthiwe, bukhuthazwa yizwe, futhi ine ...
Kunezizathu ezijulile zokuthi kungani uhlelo olukhanyayo lwensimbi villa, kufaka phakathi izindlu ezinesitezi esisodwa nezinezitezi eziningi, lukhula ngokushesha okukhulu. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zezindlu zensimbi, i-TUOOU light steel system edidiyelwe yezindlu, ikakhulukazi ilambu elinezindonga elincanyana elibandayo ...
NgoMashi 2, uMnu Robert, ikhasimende lase-Australia, wabuye weza enkampanini yethu. Lesi yisikhathi sakhe sesithathu eza eChina nase tuoou. Ngemuva kokuqonda kokuqala kokuqala, ukuhlolwa kwesibili okuphelele nokuphumelela kokugcina ngalesi sikhathi uMnu.Robert ubelokhu egcizelela ukuthi udinga ubuchwepheshe obusezingeni eliphakeme, abantu ...